ARAAKIIL KA TIRSAN WAAXDA DUULISTA HAWADA SOMALIYA OO LOO XIRAY QARAXII DIYAARADDA DAALLO - iftineducation.com
iftineducation.com – Xubno ka tirsan Waaxda Duulista Hawada Somaliya, ayaa la sheegay in loo xiray tuhunka la xiriira Qaraxii talaadadii aynu soo dhaafnay ka dhex dhacay Diyaaradda Daallo Airline oo ku sii jeeday Magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti.
Ilo Wareedyo ka tirsan Hay’adaha ammaanka Dowladda Federalka Somaliya ayaa Wakaalada Wararka XINHUA u sheegay in Saraakiil ka tirsan Waaxda Socdaalka Somaliya loo xiray Qaraxaasi.
Saraakiisha la xiray oo aanan la sheegin magacyadooda iyo tiradooda, ayaa lala xiriirinayaa inay wax ka ogaayeen Qaraxii ka dhex dhacay Diyaaradda Daallo Talaadadii aan ka soo gudubnay.
Wakaalada Wararka XINHUA waxa ay sheegtay Saraakiisha la xiray inay ku socdaan Baaritaan la xiriira tuhunka laga muujiyay.
Afhayenka Xukuumadda Somaliya C/salaam Caato, ayaa sheegay in dad gaaraya dhowr iyo labaatan ruux loo xiray Qaraxii Diyaaradda Daallo, dadkaasina Baaris ay ku socoto.
Kaamirada CCTV ee ku xiran Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho ayaa laga arkay labo ruux oo ruux kale u dhiibaya Labtop, waxaana la sheegayaa in Qaraxii Diyaaradda Daallo loo adeegsaday labtopkaasi.